ပန်းနှင့်အမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ပန်းနှင့်အမြင်	15
Posted by aye.kk on Jun 5, 2015 in Photography | 15 comments
ပန်းနှင့်တူမ သင်္ခါရ။ ခဏမျှသာနေကြရ ဤလောက။
ခင်ဇော် says: လှလိုက်တာ စိန်ပန်းနီရော။
တူမလေးနဲ့ ရိုက်ထားတာ ချယ်ရီလားဟင်??
Ma Ma says: တူမလေးက ချစ်စရာ။
ကြောင်ကြီးမလာခင် အရင်ပြောထားတာ။ စိန်ပန်းနီနီကို အဆုပ်လိုက်အနီးကပ်ရိုက်ထားတဲ့ အောက်ဆုံးပုံလေး အကြိုက်ဆုံးပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: အန်တီမို့ တူမလေးပုံကို ကြောင့်ရန်မကြောက် ဘာမကြောက် တင်ရဲတယ်ဗျာ anyway ပန်းလေးတွေက စုံလှတယ်
Ma Ei says: စိန်ပန်းလေးတွေ
ချယ်ရီလေးရယ် အရမ်းလှ သလို
kai says: တူမအချောလေးရထားတယ်ပေါ့..။
လှပခြင်းဟာ..ရတနာတပါး..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ကဗျာလေးတွေ ပိုလှတယ်လို့ပြောရင် တူမလေးက စိတ်ဆိုးမှာလား။
.တူမလေးက ပိုလှတယ်ပြောရင် ပန်းကလေးတွေက စိတ်ဆိုးမှာလား။
မြစပဲရိုး says: . ပန်းကလေး တွေက ပိုလှ တယ်ပြောရင် တော့ ကဗျာလေး တွေ က ငိုမတဲ့ ပြုံးရဲ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2396
Alinsett @ Maung Thura says: အန်တီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: စိန်ပန်း က အကြိုက်ဆုံးပန်းတွေထဲ ပါပါတယ် အစ်မရေ။
တူမလေး က ကိုရီးယားကားထဲက မင်းသမီးလေးလိုဘဲ။ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။
. ကြောင်ကြောင် မလဲ နှာကြောင် လုံးလုံး ကို ဖြစ်နေပါရော့လား။
ပုံစံပြောင်းပြလိုက်စမ်းပါ ကြောင်ကြောင်ရာ။ lol:-)))
Mike says: .ပန်းေ၇ာ ကဗျာရော တူမလေးရော လှပါ့ဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2396
aye.kk says: Alinsett
​ဒေါ် လေး says: တူမလေးက လှသည်
ပန်းနှင့် အပြိုင် ခင်းကာ
ဤမြေပြင်ပေါ် အစွမ်းကုန် ဖူးပွင့်စေဖို့
စိန်ပန်းတောင် ငိုချင်း ချရတယ်လေး#
aye.kk says: အားပေးတာ၊